Puntland oo ku faraxsan magacaabista RW Cumar Cabdirashiid – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 18 December 2014
Mareeg.com: Maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey magacaabista madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay Cumar C/rashiid Cali Sharmarke.
“Puntland iyadoo tixgalineysa isla markaana qadarineysa deganaanshaha dalka iyo siyaasada Somaaliya waxay marwalbana taageereysa qorshe walba oo ay ummada Soomaaliyeed uga baxayso jaahwareerka iyo Isqab’qabsiga siyaasadeed ee dib u dhaca ku ridey dhammaan hay’adihii Dawladda Soomaaliya, sidaa daraadeed waxay Puntland si buuxda usoo dhaweyneysaa magacaabida Reysul’waaraha cusub ee Dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Cumar C/shiid Cali Sharmaarke” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay maamulka Puntland.
“Puntland ee Soomaaliya waxay ku amaaneysaa Reysul’wasaaraha cusub Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke Aqoontiisa iyo waayo Aragnimda uu u leeyahey xilka loo magacaabey” ayey sidoo kale tiri Puntland.
Dhanka kale, Ra’isul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya, Cumar C/rishiid Cali Sharmaarke oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay qorshaha iyo howlaha uu doonayo in uu u qabto.
Cumar C.rashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu xusay in uu sii wadi doono horumarka Dowladda ay ku tilaabsatay waxa dhiman uu qaban doono oo ay ka mid tahay hiigsiga 2016 oo la doonayo in doorasho xor ah ay ka dhacdo dalka.